Blog - Winpal kpọọ ndị na-ebi akwụkwọ ọkụ na-ere ọkụ n'oge na-adịbeghị anya
Winpal akara na-ebi akwụkwọ ọkụ na-ere n'oge na-adịbeghị anya
Onye na-ebipụta akara ngosi pụtara na ọ nwere ike idezi ọtụtụ ederede na koodu mmanya, wee nyefee ha n'ụdị akara. A na-eji ụdị ngwa nbipute a karịa n'ọtụtụ ebe, dịka ụfọdụ ọfịs, ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ụlọ ọrụ ike, ụlọ nkwakọba ihe, na ụlọ ahịa ebe ị nwere ike ịhụ ya.
Kinddị mpempe akwụkwọ a na-ebipụta akwụkwọ dị iche na ndị ọzọ na-ebi akwụkwọ ntanetị nke na-ahụ akara ahịa dijitalụ. Oge a ga-eji ngwa nbipute a ga-ahazi nke ọma. Dịka ụdị ụlọ ahịa buru ibu, ọ masịrị m iji ngwa nbipute a. Ihe ndị na-esonụ na-ewebata nkenke njirimara nke onye nbipute a na ebe eji ya.
Onye na-ebipụta akara ngosi na-ejikarị usoro obibi akwụkwọ ebufe nke na-ekpo ọkụ, nke nwere ike ịdepụta aha ngwa ngwa, na-ejikarị akwụkwọ mmado nke onwe. Enwekwara ihe achọrọ na ogo nke ihe mmado a na-ejide onwe ya iji gbochie ọkọlọtọ na-emetụta akara ngosi koodu ya.
Ka ọ dị ugbu a, a na-eji ndị na-ebi akwụkwọ akara n'ọtụtụ oge, dị ka mmepụta na ụlọ ọrụ mmepụta ihe, yana nkwakọ ngwaahịa ya, akara na ya na nkwakọba ihe na leta bụ ụdị ụdị mbipụta a. Na mgbakwunye, ụfọdụ ụlọ ahịa ga-eji ụdị akara a maka ọnụahịa nke ngwaahịa, ma ọ bụ akara ngwaahịa, ma ọ bụ akara ngosi barcode, na aha ọgwụ.
A na-eji ya eme ihe dị ka akara ngosi akara ngosi akara ahịa na ụlọ ahịa, yana ogo ya na ọrụ ya dị mma. Okwesiri imegharia ya iji nwee ike ibiputa ndi editọ ederede di iche iche, tinyere koodu mmanya. Karịsịa akwụkwọ obibi akwụkwọ ya dị iche na akwụkwọ obibi akwụkwọ nkịtị, ọ nwere njirimara nke mgbochi mmiri, mmebi nsị na nguzogide ihu igwe. Anwụ ngwa ngwa bụ otu n'ime ihe achọrọ akara a.
Post oge: Ọkt-08-2020
Wifi Receipt Printer, 80mm Kwesie Nnata Printer, Nnata Mobile Printer, Onye na-ebipụta ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa, Nnata Printer, Onye na-ahụ maka nnata ihe ntanye 80mm,